Hambalyo dhamaan Umadda reer Somaliland, gaar ahaan unugyada qarsoon ee heeganka ugu jira ilaalinta hamiga umadooda. • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Waxaase cajiib iyo wax lama filaan ah noqotay, in mar qudha ay reer Somaliland ka maqlaan xukuumadda maanta talada haysaa, si waliba, dhib yar oo jees jees ah- Madaxwaynaha Somaliya ayaa Hargeysa ka soo dagaya. Waxgarad badan waxay ku noqotay fajac iyo amkaak. Hadaba, sidee bay u dhacday in Somaliland loogu badheedh, isku day noocan oo kale ah, iyadoo 30 sanadood dawlad ahayd. Cajiib: In yar aynu dul istaagno siday wax u dhaceen. Iyadoo qadiyadda Somaliland laga ixtiraamo caalamka, oo ay meel sare marayso, ayey xukuumaddii tan ka horeyso go’aansatay in ay waxoogaa lacag ah ka doontaan Xamar, wax ay markaas ku macneeyeen lacag ay Somaliland la lahayd Somaliya. Laga bilaabo wakhtigaa ilaa iyo maanta labada madaxtooyo ee Somaliya iyo Somaliland waxay leeyhiin xidhiidh wada shaqayneed, oo laga qariyo ummadda, waa siday isleeyihiin eh. Laga bilaabo wakhtigaa ilaa maantana xukuumadda Somaliya wax-baa u sii kordhayey, Xukuumadda Somaliland-na wax baa ka sii dhacyey. Waxaana qadiyaddii dhamayd laga doorbiday lacag aan badnayn. Lacagtaa yar ee Xamar inagaga soo duulduushaa, waxay keentay in indhaha caalamku ay u arkaan Somaliland, qolo aan wax badan diidanyeyn, ee gorgoran iyo inay wax badsadaan uun, isu giijinaya. Waxay labada madaxtooyo isla qaateen in ay wada galaan mashruuc loogu yeedho wadahadalada Somlailnd iyo Somaliya. Mashruucan waxa labada madaxtooyaba ugu jira waxoogaa lacag yar ah. Lacagtaa yar ee ay Somaliland u baahnayn, waxay maanta qadiyaddii Somaliland gaadhsiisay heerkii ugu hooseeyey abid. Aragtida reer Somaliya wakhtigan, ee ku aadan Somaliland- waa gobal Somaliya ka mid ah. Waxay si badheedh ah ugu yeedhaan Somaliland gobolada waqooyi. Wixii ay Somaliya ugu yeedheen maalintii dhawayd“cudurdaarka,” ayuu madaxweynaha Somaliya ku shegay in uu la hadlayo gobolada waqooyi. Waxaa taas ka sii daran madaxweynaha Somaliland oo aqbaly hadalkaa. Bal adba.